Yangon ICT Fair (August 2013)တွင် KMDမှ အထူးလျှော့စျေးများစွာဖြင့် ရောင်းချ ပေးသွားမည် | ICT.com.mm
Friday, April 25, 2014 TEAM
Amazon ရဲ့ 3D စမတ်ဖုန်း Facebook, Google Accountများကို အခြား Device များမှာ Logout… သင် iPhoneကနေ Android ပြောင်းကိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား? Apple က သီချင်းများကို ခွဲခြားပြီး အမည်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာကို iOS… Lifestyle
စီးပွားရေးသမားများ အကွက်တွေ့သည့် သင်္ကြန်ကာလ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ သြစတြေးလျ အခြေစိုက် တက္ကသိုလ် JCUS တွင် ကျောင်းလျှောက်လိုသူ… ပညာရေးအခွင့်အလန်းတွေ တင့်ဆန်းလာတော့မည် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ SIM သို့တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Best Improving Agent… Design
Free Wallpaper with Calendar – 2014/4 –… Free Wallpaper with Calendar – 2014/4 –… Free Wallpaper with Calendar – 2014/3 –… စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတဲ့ အာရုံခံစားချက်ကိုပေးမယ့် အလုပ်ခွင် ၁၅ ခု How-to
စာနယ်ဇင်းတွေရဲ့ မီဒီယာနိုင်ငံရေး စီးပွားရေးသမားများ အကွက်တွေ့သည့် သင်္ကြန်ကာလ ဆွေမျိုး ဆိုတာ အဖေ့ ချွေးဖိုး Forums
Home News Yangon ICT Fair (August 2013)တွင် KMDမှ အထူးလျှော့စျေးများစွာဖြင့် ရောင်းချ ပေးသွားမည် Yangon ICT Fair (August 2013)တွင် KMDမှ အထူးလျှော့စျေးများစွာဖြင့် ရောင်းချ ပေးသွားမည်
News Jul 26, 2013016 KMD Group
၂ဝ၁၃ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂)ရက် မှ (၄) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Yangon ICT Fair (August 2013)တွင် KMD Computer & Mobile မှ အထူးလျှော့စျေးများနှင့် အထူးအစီအစဥ်များစွာကို Booth No.B2 တွင် ပြုလုပ်ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ပြပွဲရက်အတွင်း Lenovo, Dell, Fujitsu, NEC, Acer, HP အစရှိသော Notebook Brand မျိုးစုံကို အထူးစျေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အထူစျေးနှုန်းများအနေဖြင့် KMDမှ မည်သည့် Notebookကို မဆို ဝယ်ယူသူများအတွက် ငွေကျပ် (၁ဝဝဝဝ)လျှော့ပေးမည့်အပြင် လက်ဆောင်ပစၥည်းများကိုလည်း ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ခြားအစီအစဥ်အနေဖြင့် Apple iPod Touch (64GB) မူရင်းစျေး (၃၄၅ဝဝဝ) ကျပ်ကို (၁၉၉ဝဝဝ) ကျပ်စျေးနှုန်းဖြင့် နံနနက် (၁၁:၃ဝ) နှင့် ညနေ(၄:၀၀)တို့တွင် မဲနှိုက်ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ထို့အပြင် KMD မှ ပစၥည်းဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ညနေ(၄:၃၀)နာရီတွင် Feature Phone သုံးလုံးစီကို ပြပွဲရက်အတွင်း မဲနှိုက်ပြီး လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ KMD Mobile တွင် မိုဘိုင်းဖုန်း Brand မျိုးစုံကို ပုံမှန်ရောင်းစျေးထက် လျှော့ချ ရောင်းချပေးသွားမည့်အပြင် လက်ဆောင်များစွာနှင့်၊ application အခမဲ့ ထည့်သွင်းပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ဝယ်ယူသူများအတွက် ချက်ချင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။နောက်ထပ် အစီအစဥ်များအနေဖြင့် GSM ခလုတ်ဖုန်းများအတွက် ကြိုက်တာယူ(၁၅ဝဝဝ)၊ CDMA 800 ခလုတ် ဖုန်းများကို အနည်းဆုံး (၉ဝဝဝဝ)ကျပ်ကျော် နှင့် ဘာသာစကား(၃၂)မျိုး ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော Comet Translator ကို ငွေကျပ်(၇၉ဝဝဝ)ဖြင့် လျှော့ချရောင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ နံနက် (၁ဝ) နာရီနှင့် ညနေ (၃)နာရီတို့တွင်လည်း Lenovo နှင့် Huawei Smart Phone တို့ကို ပြပွဲနေ့တိုင်း (၄၉ဝဝဝ)ကျပ်ဖြင့် တစ်နေ့ (၅) လုံးစီ မဲနှိုက်ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိလိုပါက ဖုန်း ဝ၁-၂၄၅၁၈ဝ၊ ၃၈၅၁၇၇၊ ၃၈၅၈၇၇ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
TAGSKMD at Tatmadaw Hall
tweet Previous articleFirefox OS သုံး Smart Phone များ မှာယူနိုင်ပြီ!Next articleiPadသုံးသူတွေက Nexus 7ကို စိတ်မ၀င်စား SIMILAR ARTICLES
Amazon ရဲ့ 3D စမတ်ဖုန်း
Apr 24, 2014029 ၁၅ပေ အကွာအဝေးအတွင်းမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာ
Apr 24, 2014026 Most Read Stories
www.google.com.mm ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ Apr 4, 2013 တယ်လီနောမြန်မာသည် Live Core Network မှတစ်ဆင့် ပထမဦးဆုံး ဖုန်းအသံနှင့်... Apr 8, 2014 Apple ရဲ့ iWatch စမတ်နာရီမှာ UV Light Sensor... Apr 9, 2014 မီးအိမ်လိုရော စပီကာလိုပါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cromatica Apr 11, 2014 Nikon က Android Camera အသစ်ကို ပြသ Apr 11, 2014 Random Stories
Facebook, Google Accountများကို အခြား Device များမှာ Logout... Apr 24, 2014 သင် iPhoneကနေ Android ပြောင်းကိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား? Apr 24, 2014 ၁၅ပေ အကွာအဝေးအတွင်းမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာ Apr 24, 2014 Apple က သီချင်းများကို ခွဲခြားပြီး အမည်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာကို iOS... Apr 22, 2014 Sony PlayStation4ဂိမ်းစက် အလုံးရေ (၇)သန်းကျော် ရောင်းချပြီး Apr 22, 2014 ICT.com.mm အကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက www.myanmarict.com အမည်ဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ Fourm, Directory အစရှိသည်တို့ကို လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Myanmar ICT Journalအမည်ဖြင့် အပတ်စဉ်ဂျာနယ်ကို တစ်နှစ်တိတိ အောင်မြင်စွာ မြန်မာတပြည်လုံးသို့ ဖြန်.ချိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ ict.com.mmတွင် အင်တာနက်ပေါ်မှ စျေးဝယ်နိုင်ရန်အတွက် Online Shoppingကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
© 2010 - 2014 ICT.com.mm View Order